Daraasad Soomaalida ku dartay bulshooyinka caddaanka ah oo hadal heyn abuurtay. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Daraasad Soomaalida ku dartay bulshooyinka caddaanka ah oo hadal heyn abuurtay.
Daraasad Soomaalida ku dartay bulshooyinka caddaanka ah oo hadal heyn abuurtay.
Haddaad dhafarto habeenkii xal ayaa laguu hayaa
Cilmi Baaris: “Habaarka ama dhibaatada” sodohda.
Previous articleCadaan mise madow!: Canada oo Soomaali ku tilmaantay inaysan ahayn madow sax ah.
Next articleDaraasad Soomaalida ku dartay bulshooyinka caddaanka ah oo hadal heyn abuurtay.